Zimbaboe: Endriky ny Krizy Sy Antso Fanampiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2017 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, polski, Português, বাংলা, English
Namoaka ny Time 2 Act (Fotoana Izao Hiasàna), lahatsary antserasera hanehoan'ny vahoaka Zimbaboeana ireo fomba isan-karazany hanimban'ny krizy ao amin'ny firenena ny vahoaka sy ny fari-piainan'ireo tafavoaka velona ny fikambanana CIVICUS Firaisan'izao Tontolo Izao Ho amin'ny Fandraisana Anjaran'ny Olom-pirenena. Ao amin'ity lahatsary manana fizarana 3 ity, miresaka momba ny fiantraikan'ny fitontongan'ny vola eo amin'ny fahafahan'izy ireo mihinana sy mitafy ireo olom-pirenena, ary niresaka momba ny herisetra sy nangataka fanampiana avy amin'ireo mpanelanelana tahaka ny Vondrona ho an'ny Fampandrosoana ny Faritra Atsimon'i Afrika (SADC).
Fizarana 1 amin'ny lahatsary: ahitana mpianatra tanora miresaka fa tsy malalaka ny Zimbaboeana: tsy afaka mihinana izy ireo, tsy afaka mitafy, tsy afaka mamelon-tena, tsy afaka mandray fampianarana avy amin'ny mpampianatra mikarama ara-drariny, ary tsy afaka mitady fanampiana avy amin'ny hopitaly raha sendra marary, tsy afaka mividy zavatra noho ny fampiasàna vola vahiny: Rands raha tokony ho dolara Zimbaboeana. Niharatsy ny toe-javatra, ka nihevitra mihitsy ny vahoaka fa nirodana teo amin'ny sehatra maro ny rafitra: tahaka ny fahasalamana, fiarovana, toekarena sy ny governemanta. Mikasika ny fahasalamana ohatra, tonga any amin'ny hopitaly ny olona ary mamoy ny ainy ao noho ny tsy firaharahiana azy ireo. Ary tsy misy mihitsy aza ny fanajana ny maty: tsy maintsy mandoa vola mihoa-pampana ho an'ny tranom-paty ny fianakaviana mba hakana ny vatana mangatsiaka.
Ity indray ny Fizarana Faharoa amin'ny lahatsary, mikasika ny fiantraikan'ny fitontongan'ny toekarena eo amin'ny fiarahamonina: tsy maintsy ovaina amin'ny vola azo antoka kokoa, Rand Afrikana Tatsimo ireo mpikarama mandray vola dolara Zimbaboeana, ary tsy ampy hividianana ireo zavatra ilaina andavanandro izany. Anisan'ny lohahevitra noresahana ihany koa ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny famerana ny fahalalahana miteny izay atrehin'ny firenena:
Ny fizarana fahatelo sady farany amin'ny lahatsary dia antso fanampiana sy fanohanana avy amin'ny vondrona mpanelanelana, ny SADC sy ny Governemanta Afrikanina Tatsimo. Maniry ny vahoaka mba handray andraikitra matotra izy ireo ary hanampy ny “Bread Basket of Africa” teo aloha, izay antsoin'izy ireo ankehitriny hoe raharaha basket ao Afrika.